Fivarotana zava-pisotro misy gilasy robot vokatra lafo vidy
Ny fivarotana zava-pisotro misy ranomandry robot MMD011A dia natao ho an'ny sehatra fampiharana ivelan'ny trano toy ny fetiben'ny sakafo, hetsika ivelan'ny trano, karnavaly sy ny sisa amin'ny fiheverana ny fahafahan'ny fametrahana. Ny haingo amin'ity fivarotana zava-pisotro misy gilasy ity dia azo amboarina amin'ny lafiny fampiharana samihafa. Satria ity vokatra ity dia natao ho karazana misokatra, dia azo atambatra sy disassemble mora foana eo amin'ny toerana. Ankoatr'izay, ny famenoana fitaovana dia mora raisina amin'ny fotoana rehetra.
Robot Receptionist amin'ny lamaody sy mora
Ny mpanafatra robot mpandray MOF011A dia natao manokana ho an'ny baiko miaraka amin'ny efijery 21 santimetatra. Ity vokatra ity dia tranon'ny efijery fikasihana ary azo ampitaovana kiosk mpivarotra robot miaraka amin'ny torolàlana feo hanohanana ny mpanjifa hamita ny fizotry ny famandrihana.
Masinina mpivarotra menaka manitra finday
Masinina mpivarotra menaka manitra finday MBF011A sy MBF021A dia natao manokana ho an'ny fampiharana toeram-pivarotana miaraka amin'ny fiasa finday entin'ny AGV. Ny mpanjifa dia afaka manakana ny milina mpivarotra amin'ny fotoana rehetra, manandrana ny santionany amin'ny ranomanitra ary misafidy ny tavoahangy misy menaka manitra amin'ny alàlan'ny rafitra fandoavam-bola eo an-toerana.
Kiosk kafe robot barista misy tsakitsaky
Robot barista kafe kiosk miaraka amin'ny tsakitsaky MMF011A dia natao ho an'ny sehatra fampiharana an-trano toy ny toeram-pivarotana, trano birao, seranam-piaramanidina, fitaterana sy ny toerana hafa miaraka amin'ny malalaka efitra anatiny sy malalaka fahitana. Ny vokatra dia natao ho toy ny kiosk karazana voahidy miaraka amin'ny andian-sandry robot efatra miara-miasa, manompo ny mpanjifa amin'ny kafe, gilasy, ranom-boankazo sy tsakitsaky. Ny fizotran'ny zava-pisotro sy ny sakafo rehetra dia miasa amin'ny alàlan'ny fitaovam-piadiana robot miara-miasa ho azy araka ny baiko napetraka amin'ny alàlan'ny efijery fikasihana eo an-toerana miaraka amin'ny rafitra fandoavam-bola manohana ny fandoavam-bola NFC. Miisa efatra ny fitambarany misy varavarankely fanaterana efatra ahafahana manolotra sakafo sy zava-pisotro rehetra ho an'ny mpanjifa.